परमप्रभु आफै तिम्रो अगि जानुहुन्‍छ र तिमीसित हुनुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई कहिल्‍यै छोड्‌नुहुनेछैन न त त्‍याग्‍नुहुनेछ। नडराऊ, निरुत्‍साह नहोऊ।”
 सङ्गीत-निर्देशकका निम्‍ति दाऊदको भजन  मैले धैर्यसाथ परमप्रभुको प्रतीक्षा गरें, उहाँले ममाथि दृष्‍टि गर्नुभयो र मेरो पुकारा सुन्‍नुभयो। उहाँले मलाई सर्वनाशको खाड़ल र हिले धापबाट निकाल्‍नुभयो। उहाँले मेरा खुट्टाहरूलाई चट्टानमाथि बसाल्‍नुभयो, र मलाई उभिन दृढ़ स्‍थान दिनुभयो। उहाँले मेरा ओठमा एउटा नयाँ गीत राखिदिनुभयो, हाम्रा परमेश्‍वरका प्रशंसाको एउटा गीत। धेरैले यो देख्‍नेछन्‌ र डराउनेछन्‌, र परमप्रभुमा भरोसा राख्‍नेछन्‌।
तर हे परमेश्‍वर, तपाईं मेरो वरिपरि एक ढाल हुनुहुन्‍छ, तपाईं मेरो गौरव र मेरो शिर उच्‍च पारिदिने हुनुहुन्‍छ।
हे मेरो प्राण, तँ किन उदास हुन्‍छस्‌? र मेरो अन्‍तस्‍करणमा तँ किन यति व्‍याकुल हुन्‍छस्‌? तेरो आशा परमेश्‍वरमा राख्‌, किनकि म अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँ मेरा उद्धारक र मेरा परमेश्‍वर हुनुहुन्‍छ।
मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु, कि ममा तिमीहरूलाई शान्‍ति होस्‌। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्‍ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु।”
 किनकि म यो पक्‍का गरी जान्‍दछु, कि मृत्‍युले वा जीवनले, स्‍वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले, वा शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराइले, वा सारा सृष्‍टिमा भएका कुनै पनि कुराले, ख्रीष्‍ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्‍वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्‍नेछैन।
 प्रिय हो, तिमीहरूलाई पारख गर्ने अग्‍निमय परीक्षा तिमीहरूमाथि आइपर्दा केही अनौठो कुरा भएजस्‍तै तिमीहरू छक्‍क नपर। तर ख्रीष्‍टका कष्‍ट-भोगमा सहभागी हुँदा रमाओ, ताकि उहाँको महिमा प्रकट हुँदा तिमीहरू पनि आनन्‍दित र हर्षित हुन सक।
 यदि परमप्रभुलाई मानिसको मार्ग मन पर्‍यो भने उहाँले त्‍यसका पाइला दह्रिला पार्नुहुन्‍छ। त्‍यसलाई ठेस लाग्‍यो भने पनि त्‍यो लोट्‌दैन, किनकि परमप्रभुले आफ्‍नो हातले समातेर त्‍यसलाई थाम्‍नुहुन्‍छ।
 हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍टका परमेश्‍वर तथा पिता, करुणामय पिता, र सबै सान्‍त्‍वनाका परमेश्‍वरलाई प्रशंसा होस्‌। उहाँले हामीलाई सबै दुःखमा सान्‍त्‍वना दिनुहुन्‍छ, ताकि हामीले पनि परमेश्‍वरबाट पाएको त्‍यही सान्‍त्‍वनाले कुनै पनि दुःखमा परेकाहरूलाई सान्‍त्‍वना दिन सकौं।